DDS: “Ku dhawaad 400 oo ruux ayay Cafarta ku dishay Garba-Ciise”. - Allbanaadir
Home Xogta Dahsoon DDS: “Ku dhawaad 400 oo ruux ayay Cafarta ku dishay Garba-Ciise”.
DDS: “Ku dhawaad 400 oo ruux ayay Cafarta ku dishay Garba-Ciise”.
Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Dowlad Deegaanka Soomaalida Maxamed Rooble Maxamuud ayaa qowmiyadda Cafarta ku eedeeyay in ay dil wadareed u geysatay Soomaali kunool Magaalada Garba-Ciise.
Dadka la dilay waxa uu ku sheegay in ay gaarayaan 300 oo ruux oo qaarkood wali ay heystaan maleeshiyaadka Cafarta ah ee Weerarka u geystay halka shaqsiyaad aan badbeen laga soosaaray Deegaanka sida uu hadalka u dhigay.
Maxamed Rooble Maxamuud Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Dowlad Deegaanka Soomaalida ayaa dhaliilay Ciidanka Federaalka maadaama mas’uul looga dhigay kala ilaalinta Labada Qowmiyadood balse lagu hor dilay dadka intaas la eg.
“Heshiiska lagu soo afjaray dagaalka dhexmaray Soomaalida & Cafarta waxaa kamid ahaa in Ciidanka Federaalka ay dhexdooda joogaan isla markaana labada dhinac ay isku jirsadaan fogaan dhan 10 KM” Sidaasi waxaa yiri Wasiir ku xigeenka DDS.
waa uu sii hadlay waxa uuna yiri “Cafartu waxa ay joogteysay dhibaateynta Soomaalida degen saddexda Magaalo ee ku yaalla wadada laamiga ah ee isku xirta Jabuuti & Addis Ababa, Militariga & Booliiska Federaalka ayaa ku guuldareystay in ay gacan adag ku qabtaan maadaama halkaas loo geeyay in ay kala ilaaliyaan Soomaalida iyo Cafarta”.
Isku dhacdayada Qowmiyadaha ayaa ku kordhay Itoobiya, waxyeelada ugu badan waxa ay gaartaa Xoolo dhaqatada oo u tallaaba dhul daaqsimeedka sida ay sheegeen mas’uuliyiin katirsan Federaalka.